\_WelcomeToQuljeedNet Awdal Home Contact Us About US <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />04-01-2013
Baaq Iyo Digniin: Saldhigeennu Waa Saylac
Baaqyo iyo digniino isla socda oo ku saabsan qaddiyadda Saylac ayaa naga soo gaadhaya qurba joogta Awdal, baaqyadaas ayaa waxay yihiin kuwo si gaar ah loogu dirayo qooys joogta Awdal. Digniinahan iyo Baaqyadani waxay naga soo gaadhaan ururada dhalinyarada iyo waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan ee qurba joogta Awdal ee wadamada UK, USA, UEA, Saudi Arabia, Netherland, Norwey, Sweden, Denamark, France, Yaman iyo Africa sida Kenya, Ethiopia, South Africa.
Waxay dhammaan dadka baaqyadaas soo dirayi ka siman yihiin in si deg-deg ah qooys joogta Awdal ee degaanada ku xeeran Saylac ay isugu tegaan magaalada Saylac, halkaasina ay ku muujiyaan taageeradooda hiilka iyo hooba leh ee ay la barbar taagan yihiin xildhibaanadii dhawaan lasoo doortay ee loo dhaariyay xilkooda. Waxaanay ka digayaan dhabar jabka ay inagu keeni karto in lays dhayalsado, oo la dhib yaraysto halgankii dheeraa ee dhiigu ku daatay.
Baaqyadan iyo digniinahan ayaa waxay daba socdaan warar sheegaya in beesha Ciise isu diyaarinayso duulaan ay kusoo qaado magaalada qadiimiga ah ee Saylac. Duulimaadkaas oo leh noocyo badan oo isugu jira sida shirar ballaadhan oo daba dheeraada oo ay halkaas ku qabsadaan, iyagoo inta shirarkaas lagu mashquulsanyahayna hoosta ka maleegaya maleeshiyo hubaysan oo ay kusoo galaan saylac, iyo qorshayaal la xidhiidha qaadacul dariiq iwm. Halkaasi oo ugu danbayntana ay caalamka ku tusayaan inay iyagu leeyihiin degmada Saylac , gaar ahaan magaalada Saylac.
Waxa kale oo baaqyadan iyo digniinahani daba socdaan hadalo kasoo yeedhaya xubno sheegaynaya Ergooyinka beesha Ciise u jooga Hargeysa, kuwaasi oo ku andacoonaya in xildhibaanada la dhaariyay ee Samaroon aanay haysan haba yaraatee cid taageeri doonta oo ay matali doonaan misna maamuli doonaan.
Sidaa iyo si la mid ahna waxay iyadna qurba joogta Adal ku darsanayaan xisaabta hadal dhawaan kasoo yeedhay Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland, mudane Cadami oo ahaa af-hayeenkii Ergadii loo soo diray Boorama, kaasi oo ka dhawaajiyay in arrinta Saylac aanay wali dhawayn oo si fudud ku dhammaanayn.
Si kastaba ha ahaatee, qaddiyadda Saylac oo dhiig loo qubay ayaa wali an u dhaadhicin dadyoowga quudaraynaya ee ku qadhaabanaya mabaadii’iida kala ah ‘ku qabso ku qadi mayside’ iyo ‘qaybi oo xukum’. Balse Qurba joogta iyo qooys joogta Awdal/Salal/Gabiley ayaa waxay isu dhaarsadeen inaan dhankooda looga soo dhici karin dhulkooda hooyo, Saylacna tahay dhaxal Awoowo, waxayna baaqooda kusoo afjareen 'Saldhigeennu Waa Saylac'.
Qurba Joogta Awdal ee USA, Europe, Asia and Africa